Acer Swift 7 bụ Acer ọhụrụ 1 cm gbara ọkpụrụkpụ | Akụkọ akụrụngwa
Acer Swift 7 bụ Acer ọhụrụ 1 cm oké ultraportable
Ọzọ anyị na-aga n'ihu na Actualidad Gadget na-agwa maka akụkọ niile a na-ewepụta na IFA nke a na-eme ụbọchị ndị a na Berlin. Eselọ ọrụ Taiwanese ka gosipụtara Acer Swift 7 nke kachasị ọhụrụ site na ụlọ ọrụ ahụ ka hụchara ọkụ na Berlin na nke ahụ dị ka asọmpi siri ike maka Apple's 12-inch MacBook na HP Specter dị egwu.. Acer Swift 7 dị naanị 9,98 millimeters, ọ bụ nke aluminom adịghị iche. Ihuenyo nke ngwaọrụ a bụ sentimita 13,3 ma nye anyị mkpebi HD zuru oke nke teknụzụ Gorilla Glass na-echebekwa.
Ọ bụrụ na anyị eleba anya n'ime, anyị ga-ahụ a Intel Core i5, nke ọgbọ ọhụrụ a na-akpọ Kaby Lake. Anyị nwere ike ịhazi ngwaọrụ ahụ ruo 8 GB nke RAM. N'ime anyị na-ahụ 256 GB na SSD na njikọ USB-C abụọ. N'ịgbaso nnwere onwe dị egwu nke njedebe Intel kachasị ọhụrụ, ihe nlereanya a na-enye anyị ihe ruru awa 9 nke ọrụ na-aga n'ihu na-enweghị ịgafe chaja. Ọnụahịa nke ihe nlereanya a na-amalite na $ 999, na-enweghị akụkọ banyere mbata ya na Europe na mba ndị ọzọ n'oge a, mana dịka ihe ha kwadoro, ọ nwere ike ịmalite iru ahịa na Ọktọba, n'ime otu ọnwa.
The Acer Swift 7 bụ elu nke nso a ọhụrụ nso nke ji ede na-amalite na Acer Swift 1 nke na - ejikọta Celeron, 4 GB nke RAM na 32, 64 ma ọ bụ 128 GB nke nchekwa. Ihe nlere a malitere na euro 249.
El Acer Swift 3, na-enye anyị Intel Core processors ruo 8 GB nke RAM na ruo 512 GB nke SSD. Ọ ga - ejikọ ọdụ ụgbọ USB-C ma sie ike 18mm. Ọnụ mmalite bụ 449 euro.
Anyị mechara chọta Acer Swift 5, nke ọgbọ nke asaa jikwa Intel Core i / ya na 256, 512 GB nke diski ike SSD wee ruo 8 GB nke ebe nchekwa RAM. Ọ ga-agụnye ọdụ ụgbọ USB-C. Ọnụ mmalite nke ihe nlereanya a, yana awa 13 nke nnwere onwe, na-amalite na euro 749.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Acer Swift 7 bụ Acer ọhụrụ 1 cm oké ultraportable
Adidas ga-emepụta ụlọ ọrụ nke ya na-arụ naanị site na ndị na-arụ ọrụ mgbanaka
Samsung Gear S3 ga-akwụ ụgwọ ọnụahịa na 399 euro ma dakọtara na iPhone